Senator Ilyaas Cali oo dhaliilay siyaasadda Arrimaha dibbadda ee Dowlada Soomaaliya -
HomeWararkaSenator Ilyaas Cali oo dhaliilay siyaasadda Arrimaha dibbadda ee Dowlada Soomaaliya
Senator Ilyaas Cali oo dhaliilay siyaasadda Arrimaha dibbadda ee Dowlada Soomaaliya
February 16, 2020 F.G Wararka 0
Senetor Ilyaas Cali Xasan oo ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ah Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Xisbiga Himilo Qaran ayaa shaki geliyay in qorshaha booqashada Madaxweyne Farmaajo ee magaalada Hargeysa uu yahay mid ka timid Madaxweyne Farmaajo.
Ilyaas Cali Xasan oo jooga dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in qorshaha booqashada la sheegayo Madaxweyne Farmaajo uu ku tagayo magaalada Hargeysa inaysan ahayn mid isaga ka timid balse uu yahay mid ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu wato.
“Arrintan waa mid aan ka iman Madaxweyne Farmajo waxayna taasi burburineysaa wixii ka dhalan lahaa,Haddii uu kaligii uu u duulo hargeysa talaabo fiican ayay ahaan lahayd balse ninka safarka ah waa Abiy Axmed”ayuu yiri Senator Ilyaas.
Senatorka ayaa sheegay in cudurdaar dhowaan uu bixiyay Madaxweyne Farmaajo ay ahayd mid qaldan oo sii xumeysay dareenkii dadka ka soo jeeda gobolada Waqooyi.
“Raaligelintii uu bixiyay ma ahayn mid boqolkiiba boqol ah oo hadalo kale ayuu raaciyay oo arrintii sii xumeysay.”ayuu sii raaciyay Senator Ilyaas.
Senator Ilyaas ayaa aad u dhaliilay siyaasadda arrimaha dibada ee dowlada Soomaaliyeed isagoo tusaale u soo qaatay in dowlada Soomaaliya ay noqotay mid dhinicii uu doono u wato Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed.